Sidee loo midabeeyaa sawirro madow iyo caddaan ah | Wararka Gadget
Dhamaanteen waxaan leenahay qaraabo ka da 'weyn, ha ahaadaan ayeeyooyin ama adeero intabadan, kuwaas oo raba inay la kulmaan taariikh gaar ah, ha ahaato sanadguuradii arooska, dhalashadii ama sabab kasta oo anshax ahaan nagu qasbeysa inaan sameyno hadiyad. Haddii aan dooneyno hadiyaddeena inay ahaato mid gaar ah, ma jiraan wax ka fiican sawirada.
Ahaanshaha dad da 'weyn, waxay u badan tahay in tiro badan oo sawirradan ah, gaar ahaan markii ay yaraayeen, ay ku jiraan madow iyo caddaan. In kastoo noocyadaas sawiro ah waxay leeyihiin soo jiidasho gaar ah, waxaan ku siin karnaa taabasho gaar ah oo aad u qiiro badan adiga oo dhowr sano ka qaadno fasax siinta iyaga midab.
Sida iska cad, macnaheedu maahan inaan iskudayno Photoshop si aan u aadno midabaynta mid kasta oo ka mid ah aagagga ee sawirada sawiraya midabada sawirka midabku soo bandhigi karo, hab loo adeegsaday sanado badan ka hor midabaynta filimada madow iyo caddaan, hawl daal badan oo ku lug leh rinjiyeynta dhammaan looxyada filimka (shineemada 1 ilbidhiqsi waa 24 loox) .
Si aad awood ugu yeelatid midabbada sawirada midab madow, iyo sidoo kale aflaanta madow, haddeer waa suurtagal si dhakhso leh, maadaama lagu dalbaday software tababaran (barasho qoto dheer) si otomaatig ah loogu ogaado daahyada midabka cawliga ah muuqaal ahaan loona turjumo midabada muuqaalka (caqliga macmalka ah).
1 Muuji sawirada
2 Ku madoobaw sawirrada madow iyo caddaan adoo adeegsanaya websaydhka leh 'Colourise'
3 Ka ilaali sawirada madow iyo kuwa cad mobilkaaga
3.2 Colorize (macruufka)
3.3 Sawirada Colorize (Android)
4 Midabaynta sawirro madow iyo caddaan leh Photoshop
Waxaa jira codsiyo / adeegyo badan oo loogu talagalay midabaynta sawirro hore, labadaba qaab adeegyo websaydh iyo qaab codsiyo loogu talagalay labada desktop iyo aaladaha gacanta. Laakiin ugu horreyntii, haddii aynaan sawirada iskaan Waxa aan rabno inaan badalno waa inaan adeegsano barnaamijka 'Google's FotosScan application', oo ah codsi loo heli karo macruufka iyo Android labadaba.
FotoScan oo ka socda Google, ayaa noo oggolaanaya ku sawiro sawiro hore kamaraddeena casriga ah, iyaga oo la jajabiyo, iyada oo aan lagu darin milicsiga oo dib loo soo celiyo intii suurtogal ah (iyadoon la samayn mucjisooyin). Codsigan waxaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash ah iyada oo loo marayo xiriiriyeyaasha hoose ee iOS iyo Android.
FotoScan oo ka yimid Sawirrada Googlefree
Haddii aan sidoo kale isticmaalno Sawirada Google, dhammaan sawirada si otomaatig ah ayaa loogu soo dhejin doonaa Sawirrada Google, taas oo noo oggolaan doonta inaan si dhakhso leh ugala soo baxno kombiyuutarkayaga, haddii aan qorsheyneyno inaan adeegsanno adeeg web ama codsi desktop ah, annaga oo aan u dirin boostada, Bluetooth, kuna soo dejineynin fiilo kombiyuutarkeena ...
Ku madoobaw sawirrada madow iyo caddaan adoo adeegsanaya websaydhka leh 'Colourise'
Sida adeegyada / codsiyada badankood ee noo oggolaanaya inaan midabbada ka qaadno sawirrada madow iyo caddaan, waxaan had iyo jeer heli doonnaa natiijooyin wanaagsan haddii aan u adeegsanno sawirrada xallinta ugu sarreysa ee suurtogalka ah. Dhinac muhiim ah oo laxiriira arimaha gaarka ah, waxaan kaheleynaa in sawirada aan usoo gelino degelkan aysan ku sii nagaanaynin serverka, mid kamid ah dhibaatooyinka guud ee noocan ah dalabka
Midabku si fudud ayuu u shaqeeyaa. Kaliya waa inaan jiidanaa sawirka aan dooneyno inaan u bedelno leydi laydiinka muuqanayo boggaaga, iyo sug dhowr ilbiriqsi ilaa ay si otomaatig ah loo soo dhejiyo oo loo midabeeyo.
Ka ilaali sawirada madow iyo kuwa cad mobilkaaga
MyHeritage waa codsi loo heli karo labadaba macruufka iyo Android-ka oo si otomaatig ah ugu beddelaya sawiradeena madow iyo caddaan midab. Tani ma aha shaqada ugu weyn ee codsigan, codsi loogu talagalay in lagu abuuro geedo qoys, geedo aan ku isticmaali karno sawirada aan ku midabeyno.
Dhamaan sawirada aan badaleyno, waanu u dhoofin karnaa albumkeena sawirada inaad u adeegsan karto ujeedo kale oo aan la xiriirin arjiga. Kaliya laakiin waa inay kujirto halyeey yar oo leh magaca dalabka waa geeska midig ee hoose ee sawirka uu midabeeyo.
Markaanu furno arjiga, dhammaan xulashooyinka uu codsigu noo diyaariyo, guji Fotos.
Marka xigta, dhagsii Kudar sawirro oo waxaan ka soo xulnaa albumkeena sawirka aan dooneyno inaan midabeyno.
Haddii aanaan hore u baarin, waxaan si toos ah uga samayn karnaa arjiga adigoo gujinaya Sawirro iyo dukumiintiyada (In kasta oo natiijooyinka ugu fiican laga helayo GoogleS FotoScan.
Marka sawirka la midabeeyo laga helo dusha sare ee arjiga, dhagsii.
Ugu dambeyntiina, waa inaan gujinnaa wareegga midabka leh ee ku yaal qeybta dhexe ee kore ee shaashadda iyo ilbiriqsiyo ka dib beddelaadda ayaa la sameyn doonaa.
Si aan u hubin karno natiijada, codsigu wuxuu na tusayaa khad toosan oo dhaqaaq ah oo aan awoodno bidix uga dhaqaaq midig si aad u aragto sida ay ahayd kahor midabaynta iyo sida aad tahay isbedelka ka dib. Si aan ugu kaydinno albumkeena sawirka, kaliya waa inaan dhagsano badhanka saamiga, badhanka aan sidoo kale ugu diri karno emayl, WhatsApp ama codsi kasta oo aan ku rakibnay qalabkeena.
Heritage: Geedka Qoyska/DNA
Colorize waa mid kale oo ka mid ah codsiyada diiradda saaraya noo oggolaanshaha inaan ku darno midab sawirrada madow iyo caddaan, sawirro duug ah sida codsigii hore. Dukaanka App-ka waxaan ka heli karnaa codsiyo kale oo noo oggolaanaya inaan midabbada ka qaadno sawirro madow iyo caddaan ah, laakiin tayada ugu dambeysa ee ay bixiyaan aad ayey u yar tahay Kuma dhibsan inaan ku daro maqaalkan.
Markaanu furno arjiga, guji Sawir ama soo dhig Sawir.
Markaas ayaan gujineynaa Soo dejinta waxaanan doorannaa sawirka maktabadda oo aan dooneyno inaan adeegsanno.
Dhowr ilbiriqsi ka dib, waxay qaadataa waqti dheer marka la barbar dhigo codsiyada / adeegyada kale ee aan kor ku tusay, waxay noo soo bandhigi doontaa natiijada.
Sawirkaas waan awoodnaa ku keydi dusha ama si toos ah ula wadaagno emayl, WhatsApp ama wixii kale ee codsi ah ee aan ku rakibnay kombuyuutarkayaga.
Sawirada Colorize (Android)
Sawirada Colorize waa mid kale oo ka mid ah xalka aan ku hayno Android kudar kudheer midab sawiro madow iyo cadaan ah. Kani waa arjiga kaliya ee noo ogolaanaya inaan wax ka bedelno qiimayaasha qaarkood si aan u midabeyno sawirka sida isuduwaha muujinta iyo isbarbardhiga, taas oo inkasta oo ay run tahay, ha qaban mucjisooyin, haddii ay noo ogolaaneyso inaan helno natiijo wanaagsan oo kama dambeys ah kuma faraxsanayn beddelka bilowga ah ee aad abuurtay arjiga.
Developer: Midabbada Sawirada
Midabaynta sawirro madow iyo caddaan leh Photoshop
Midabaynta sawirrada midabbada madow iyo caddaanka ah oo aad u fudud codsiyada / adeegyada aan kor uga faallooday. In kasta oo kiisaska badankood, natiijadu ka badan tahay wax la aqbali karo, marmarka qaarkood ma dhici karto. Xaaladahaas, waa inaan wax ka beddel culeys-culeyska sawirka oo mar labaad adeegyadan adeegso.
Haddii aan haysanno waqti, waqti badan, dulqaad iyo aqoon Photoshop, waxaan adeegsan karnaa qalabkan wax lagu beddelayo Adobe ee cajiibka ah, a hawl adag iyo hawl adag in aynaan si qoto dheer ugu sharxi doonin qodobkaan. Laakiin si aan fikrad kuu siino, sawirrada midabbada madow iyo caddaan midabbada leh, waa inaan mid mid u xulanaa dhammaan qaybaha sawirka aan dooneyno inaan midabeyno.
Markaan xulano dhammaan walxaha yeelan doona midab isku mid ah, waa inaan abuurnaa lakab cusub oo midab adag oo buuxa ah (midka aan dooneyno inaan ku isticmaalno aaggaas). Wixii midabka ku hagaaji hooska sawirkaQaybaha lakabyada waa inaan ku xulannaa habka midabaynta midabka si midabku ugu habboonaado curiyaha aan doorannay.
Ugu dambeyntiina, waa inaanu hagaajino farqiga u dhexeeya dhammaan aagaggii aan soo xulnay oo aan ku dabaqnay lakab midab ah oo u maraya Goobaha hagaaji madow, qaybta ugu muhiimsan ee sawirradii hore ee madow iyo caddaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Sida loo midabeeyo sawirro madow iyo caddaan ah